Caalamka, 03 February 2018
Sabti 3 February 2018
Muhaajiriin Lagu Weeraray Talyaaniga
6 qof oo ka tirsan muhaajirinta Afrikan-ka ah ee ku nool dalka Talyaaniga ayaa maanta ku dhaawacmay rasaas uu ku furay nin Talyaani ah oo hubeysanaa.
Daacish oo 11 Ruux ku Dishey Afganistan
Ugu yaraan 11 ka tirsan ciidanka millatariga Afganistan ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen, kadib weerar ay aroornimadi hore ee saaka malleeshiyo hubeysani ay ku qaadeen akadeemiyad ciidanka lagu tababaro oo ku taalla magaalada Kabul ee caasimadda Afganistaan.
Qarax Xooggan oo ka Dhacay Magaalada Kabul
95 qof ayaa dhintay, in kabadan 163-kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay caasimadda Afghanistan. Qaraxan oo loo adeegsaday baabuur "Ambulance" oo walxaha laga buuxiyay ayaa waxaa sheegtay kooxda Taliban.
Riyad: Amiirro Xabsiga laga sii Daayey
Dolwadda Sacuudiga ayaa lagu soo warramayaa inay sii deysay qaar ka mid ah amiiradda ka tirsan boqortooyada Sacuudiga oo uu ku jiro maalqabeenka Al-Waleed bin Talal, kuwaasi oo lagu qabqabtay howlgal dhacay bishii November.
Shirka Dhaqaalaha Adduunka oo Maalinkii 2-aad Galay
Magaalada Davos ee dalka Switzerland waxaa Maalintii labaad ka socda shirka caalamiga ahaa ee dhaqaalaha aduunka.
Canada: Qoys Caruurtii Laga Qaatay
Horaantii toddobaadkan, magaalada Vancouver ee dalka Canada ayaa qoys Soomaali ah waxaa laga qaaday 10 caruur ah oo ay dhaleen, iyada oo labadii waalid iyagana la sheegay in la xiray ka dib markii caruurtooda la qaaday.
WHO oo Ku Baaqday Adeeeg Caafimaad oo Bilaash Ah
Agaasimaha ururka caafimaadka aduunka ee WHO, Dr. Tedros Adhanom, ayaa u sheegey 192-ka dal ee xubnaha ka ah ururkan in adeeg caafimaad oo bilaash ah oo dalalka dunida oo dhan dadku ay helaan ay tahay, midda kaliya ee suuragelin karta in dadka oo idil ay ku noolaadaan caafimaad iyo bad qab.
Turkiga oo Weeraray Magaalada Afrin
Warbaahinta dawladda Turkiga ayaa sheegay in ciidamada waddankaasi ay ka tallaabeen xadka dalka Siiriya ayna galeen magaalada ay haysteen maleeshiyada Kurdiyiinta ee Afrin maalin kadib markii diyaaradaha Turkiga la sheegay inay duqeeyeen ilaa 100 goobood oo fadhiisimo ah maleeshiyada YPG.
Barn. Faaqidaadda: Sanad Guurada 1-aad ee Madaxweyne Trump
Ku soo dhawaada dhageystayaal Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxa uu barnaamijka ku saabsan yahay hal sano ayaa ka soo wareegatay markii uu xafiiska la wareegey madaxweyne Trump.
Tahriibayaal Laga Soo Bad-baadiyay Badda Mediterranean
Muhaajiriin gaaraya 1,400 ayaa laga soo badbaadiyay 24-kii saac ee la soo dhaafay, badda Mediterranean, sida ay sheegeen Ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga .
Maraykanka oo Joojiyay Kalabar Gargaarka Qaxootiga Falastiin
Dowqladda Maraykanka ayaa joojisay kala-badh gargaarkii ay siin jirtay hay’ad ka tirsan QM oo taageerta qaxootiga Falastiiniyinta.
Wiilka Feysal C. Waraabe oo Suuriya ku Dhintay
Xuseen oo uu dhalay guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID ee Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa ku dhintay dalka Suuriya oo uu sannadihii u dambeeyay isaga iyo xaaskiisu ku sugnaayeen.